शंकर ग्रुपप्रति लक्षित गर्दै सामाजिक सञ्जालमा बढ्यो आक्रोश, उपभोक्ता भन्छन्– ‘कारबाही कहिले हुन्छ ?’ - Malayakhabar
होम पेज अर्थ / कर्पोरेट शंकर ग्रुपप्रति लक्षित गर्दै सामाजिक सञ्जालमा बढ्यो आक्रोश, उपभोक्ता भन्छन्– ‘कारबाही कहिले...
काठमाडौं । वार्षिक ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने र अर्बौं कमाउने नेपालको एक ठूलो व्यावसायिक घराना शंकर ग्रुप पछिल्लो समय निकै विवादित बन्दै गएको छ । अरूको कारणबाट नभई आफ्नै बदमासीबाट यो ग्रुप विवादित बन्दै गएको हो । कुनै समय अत्यधिक उपभोक्तालाई आकर्षित गर्न सफल यस गु्रपलाई पछिल्लो समय हामीले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने भ्रम परेजस्तो देखिन्छ । असत्य एकदिन पर्दाफास भएरै छाड्छ भनेझैं यस ग्रुपका कर्तुतहरू पनि एकपछि अर्को गर्दै सार्वजनिक हुँदै गएका छन् । यसबाट ठगिएका उपभोक्ताले भने ती सबैको क्षतिपूर्ति र कारबाहीको हिसाबकिताब खोजिरहेका छन् ।
आमालाई संकट पर्दा हेरचाह गर्नुको साटो थैलीबाट पैसा चोर्ने छोरो नालायक मात्रै होइन कुपुत्र पनि हो । देश भनेको पनि आमाजस्तै
हो । देश संकटबाट गुर्जिएको बेला सहयोग गर्नु त्यस देशका नागरिकको दायित्व हो । संकटकालीन अवस्थामा स्रोत नहुनेले समेत भोका नागरिकलाई खाना खुवाएको देख्न सकिन्छ । मानवीयतालाई सम्झेर भए पनि आफ्नो ठाउँबाट सक्दो सहयोग र सहारा दिनु कर्तव्य हुन आउँछ । यस्तो बेलामा हुने खाने र अर्बौंका मालिकसँग त आम मानिसको अझ बढी अपेक्षा हुन्छ नै । सो अपेक्षाअनुसार कतिपयले सहयोग पनि गरिरहेका छन् ।
तर, विश्वव्यापी महामारीका कारण उत्पन्न हाहाकार, अनिकाल, भोकमरीको यो असामयिक समयमा धनाढ्य भनिएका व्यक्तिले नै केही लाखका लागि ¥याल चुहाएको देखियो । ज्वरो नाप्न प्रयोग हुने थर्मल गनको कालोबजारी गर्ने शंकर ग्रुपका मालिक सुलभ अग्रवालजस्ता पात्रको व्यवहारले सेवाभाव र मानवीयताको समेत खिल्ली उडाएको छ । जसको दोहोरो चरित्रका कारण आम सर्वसाधारण भने रनभुल्लमा परेका छन् । कोरोना महामारीले देशलाई गाँजेको बेला थर्मल गनको कालोबजारीमा सुलभ अग्रवाल पक्राउ परेपछि यो ग्रुपको असली चरित्र उदांगिएको हो ।
हुन त यसअघि पनि यो ग्रुपले हात हालेका क्षेत्रहरू विवादित नै थिए । तर, यसका बदमासीहरू शृंखलाबद्ध सार्वजनिक भएपछि यसको दूषित नियत प्रस्ट भएको हो ।
सामाजिक सञ्जालमा जनताको आक्रोश
शंकर गु्रपको लूटधन्दा र झुटको फन्दामा परेका आम उपभोक्ता निकै रुष्ट बनेका छन् । सो आक्रोश उनीहरूले विभिन्न माध्यमबाट व्यक्त गरिरहेका छन् । अहिले डिजिटल प्रविधिको उपहार सामाजिक सञ्जाल नियाल्ने हो भने पनि शंकर गु्रपप्रतिको आक्रोशको प्रतिबिम्ब पर्याप्त भेट्न सकिन्छ । खासगरी यो ग्रुपका उत्पादन र सञ्चालकहरूप्रति लक्षित टिप्पणीहरू बढी भेटिन्छन् । फेसबुक र ट्वीटरका भित्ताहरूमा उपभोक्ताको आक्रोश पोखिएको छ । जसबाट उक्त कम्पनीका प्रोडक्टमाथि उपभोक्ताले गरेको बर्षांैदेखिको विश्वास पनि टुक्रिएको भान हुन्छ ।
सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा शंकर भट्टराई लेख्नुहुन्छ, ‘शंकर ग्रुपको मालिक के गर्दछ, कालोबजारीमा थर्मल गन बेच्छ ? कस्तो सुनियो ? आखिर जगदम्बाको छड÷सिमेन्टबाट मजबुत घर बन्ने भ्रम मात्रै रहेछ, छिनभरमै ढल्यो त ?’
शैलेन्द्र चपागाईं ट्वीटरमा लेख्नुहुन्छ ‘देशको मेरुदण्ड भन्दै कुर्लिकुर्लि विज्ञापन गर्ने जगदम्बा स्टिलको कर्तुत बल्ल पो थाहा भो । देशभरिका काम नलाग्ने कबाडीका सामान जम्मा गरी बनाउने भएर पो कुलेर्को रैछ । देशको मेरुदण्ड भन्दै यसैलाई रोजेकाहरूको हालत के भयो होला ? प्रयोग नगरेकाहरू चाहिँ अब होसियार ।’
यस्तै रामकाजी घिमिरे पनि ट्वीटरमा आफ्नो आक्रोश पोख्नुहुन्छ , ‘जगदम्बा छड कम्पनीको रड छड आदि प्रयोग गरेर क–कसले आफंैलाई धिक्कार्दै हुनुहुन्छ होला ? गुलियो विज्ञापनको भरमा उपभोक्ता छक्याउने जोसुकैलाई हदैसम्मको सजाय हुनुपर्छ है सरकार ।
यसैगरी सानुकाजी श्रेष्ठ सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेख्नुहुन्छ, ‘शंकर ग्रुपले गुणस्तरहीन सामान बेचेर चलाएको लुटको साम्राज्य कहिलेसम्म चल्ने हो यो देशमा ? यसको ब्रह्मलूटविरुद्ध कहिले के कारबाही हुने हो ? कि तँ रोएजस्तो गर् म पिटेजस्तो गर्छु भनेर सरकारले नै चोख्याउन लागिपरेको छ ? सामान प्रयोग गरिसकेका हामी उपभोक्तालाई त जे क्षति हुनु भइसक्यो तर यस कम्पनीमाथि कारबाहीको डण्डा नचलाएसम्म हाम्रो आत्माले मान्दैन । यसलाई कानुनका किला ठोकेको देखे मात्र हाम्रो मन शान्ति हुन्छ ।’
शम्भु प्रसाद ढुंगाना ट्वीटरमा लेख्नुहुन्छ, ‘ मनगढन्ते विज्ञापन छर्दै आएको शंकर ग्रुप र जगदम्बा छडजस्ता सामानमाथि प्रतिबन्ध लगाऊ सरकार । यो असनको छाडा साँढेभन्दा बढी उन्मत्त भइसकेछ । आम उपभोक्ताको विश्वासमा लात हान्दै हजारौँलाई पंगु बनाएर व्यापार फस्टाउन सफल यसका अन्य कर्तुत पनि सार्वजनिक गरियोस् ।’
यी त केही प्रतिनिधि आवाज मात्रै हुन् । विगत लामो समयदेखि नै यस्ता सयौँ पोस्टमार्फत उक्त कम्पनीबाट पीडित उपभोक्ताले आफ्ना असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन् । यसबाट अहिले मात्र नभई अघिदेखि नै यस ग्रुपका कामप्रति जनताको आक्रोश रहिरहेको देख्न सकिन्छ । तर पनि कुनै न कुनै बहाना वा पैसाको पावरमा यसका सञ्चालकहरू कानुनलाई आफ्नो मुठ्ठीमा राख्न सफल भएका देखिन्छन् ।
शंकर ग्रुप कारबाहीमा, अध्यक्षलाई सम्मान
व्यक्तिगत स्वार्थमा सीमित नभई समाज तथा राष्ट्रलाई अमूल्य योगदान पु¥याएका व्यक्तिलाई सम्मान, पदक तथा विभूषणको ताज पहि¥याइन्छ । संविधान दिवसका अवसरमा असोज ३ गते नेपाल सरकारले पनि राष्ट्रको लागि योगदान दिएका भन्दै केही व्यक्तिहरूलाई विभिन्न विभूषणले सम्मान ग-यो ।
सरकारद्वारा विभूषित हुनेहरूको पंक्तिमा यस्ता व्यक्ति पनि छन् जसको कम्पनी गुणस्तरहीन सामाग्री उत्पादन गरेको भन्दै कारबाहीमा समेत परेको छ । सरकारबाट विभूषण थाप्ने शंकर गु्रपका अध्यक्ष शंकरलाल अग्रवाल (गोल्यान) लाई नेपाल सरकारले प्रबल जनसेवा श्री (चतुर्थ) बाट विभूषित गरेको हो । तर, नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले सोही गु्रपबाट उत्पादित वस्तुको परीक्षणमा उद्योगले नेपाल गुणस्तरअनुरुप उत्पादन नगरेकाले केही दिनअघि कारबाही गरेको छ । यस विषयमा पनि सामाजिक व्यापक व्यंग्य र विरोधसमेत भएको थियो ।
शंकर ग्रुपको विवादित प्रोजेक्ट
शंकर ग्रुपको विवादित प्रोजेक्टमध्येको अर्को एक हो काठमाडौंको नक्सालमा निर्माण भइरहेको पाँचतारे होटल । सो अत्याधुनिक होटल निर्माणको सुरुवातदेखि नै विवादित बने पनि अझै मिल्न सकेको छैन । तर होटल निर्माणको क्रम भने जारी नै छ ।
शंकर ग्रुपअन्तर्गतको जगदम्बा हस्पिटालिटीले निर्माण गरिरहेको हिल्टन होटलले स्थानीयलाई निकै सास्ती दिँदै आएको यसको निर्माण क्रमसँगै सार्वजनिक हुँदै आएको छ । उक्त होटल निर्माणका क्रममा न्यूनतम मापदण्डलाई बेवास्ता गरिएको पाइएको हो । मापदण्डअनुसार शंकर ग्रुपको कम्पनीले सँधियारसँग अनिवार्य स्वीकृति लिनुपर्छ । तर, शक्तिको आडमा जगदम्बा हस्पिटालिटीले अन्य मापदण्डको पनि बेवास्ता गर्दै आएको पाइएको छ ।
शंकर ग्रुपले जगदम्बा हस्पिटालिटी र हिल्टन वल्र्डवाइडको लगानीमा काठमाडौंको नक्साल भगवतीबहाल मन्दिरनजिकै निर्माण गरिरहेको पाँचतारे हिल्टन होटलको जग हाल्ने बेला नक्सालका स्थानीयलाई निकै सास्ती दिएको थियो । स्थानीय अझै पनि सो होटेलबाट निकै असुरक्षित महसुस गरिरहेको बताउँछन् । स्थानीय हिराकाजी महर्जनका अनुसार होटल निर्माणको सुरुवातदेखि नै स्थानीयले सास्ती पाएका छन् । ‘हामीलाई निक्कै सास्ती भयो भनेर विभिन्न निकायमा गयौं । तर, शक्तिको आडमा भइरहेको यस्तो काममा हाम्रो आवाजको कतै सुनुवाइ नहुने रहेछ’, उहाँले भन्नुभयो ।
यहाँ पाँच रोपनी जग्गामा करिब चार अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेर यो होटल निर्माण गरिँदै छ । दुई तला बेसमेन्टसहित १५ तले यहाँ होटल निर्माण भइरहेको छ । ‘यस होटलको जग हाल्ने क्रममा २०७३ सालको पुसमा नक्साल भगवतीबहाल मन्दिरचोकदेखि प्रहरी प्रधान कार्यालयतर्फ जाने सडक निकै गहिरो गरी भासिएको थियो ।’
अर्का स्थानीय गोपाल वस्नेत भन्नुहुन्छ, ‘जमिनमुनि धेरै गहिरो खनेर ठूलो भूकम्पभन्दा बढी थर्काएका कारण हामी आन्दोलनमै उत्रिएका थियौं । त्यसबेला नक्सालका स्थानीय हामी सबै आफ्नो घर नै भत्किने सक्ने भन्दै आन्दोलित भएका थियौं ।’ त्यसबेला आन्दोलनमा उत्रिएका केही व्यक्तिको घर किनेर र होटल नजिकैका केही पसलेलाई प्रतिव्यक्ति केही हजार रुपैयाँ थमाएर सो आन्दोलन मत्थर समेत परिएको अर्का एक स्थानीय बुद्धिजीवीले बताउनुभयो । स्थानीयले विरोध जनाए पनि शक्तिका आडमा होटल निर्माण भइरहेको छ । २०७२ सालको भूकम्पभन्दा केही महिनापछिबाट निर्माणको काम अघि बढाएको यस होटल अहिलेसम्म पनि निर्माणाधीन अवस्थामा छ । स्थानीयको विरोध मत्थर पार्न आर्थिक चलखेल भएको र पैसाकै कारण सबै चुपचाप बसेको स्थानीयको आरोप छ ।
महानगरपालिकाका एक उच्च अधिकृतले नाम सार्वजनिक नगर्ने शर्तमा भन्नुभयो, ‘सानो क्षेत्रफलमा यति ठूलो होटेल बनाउन स्वीकृति दिने क्रममा गलत मनसायबाट नक्सापास स्वीकृत गरिएको छ । यसमा ठूलै रकमको चलखेल छ ।’ उहाँले हचुवाका भरमा प्लिन्थ लेभलसम्मको नक्सा पास गरिएको समेत बताउनुभयो ।
ग्रुपका सबै सञ्चालक विवादित
शंकर ग्रुपका काम र प्रोडक्ट मात्र होइन, यसका सञ्चालक पनि कुनै न कुनै कुरामा विवादित बन्दै आएका छन् । ‘जगदम्बा स्टिल राष्ट्र निर्माणमा समर्पित’ भन्दै विज्ञापन गर्ने शंकर ग्रुपले देश नै संकटमा परेको बेला उल्टो राष्ट्र लुट्नमा केन्द्रित देखियो । शंकर ग्रुपका उपाध्यक्ष सुलभ अग्रवाल कालोबजारीको आरोपमा पक्राउ परेपछि व्यावसायिक वृत्त नै अचम्ममा परेको थियो । कारण थियो ग्रुपको कारोबार नै वर्षमा झन्डै एक खर्ब थियो । वर्षमा अर्बौ नाफा कमाउँथे । अपुग्दो केही थिएन । किन कालोबजारी गर्नुपरेको होला ? एक माडवारी व्यवसायी भन्छन्, ‘उहाँहरूको नियत नै यस्तै हो । विगतका दृष्टान्तहरूले पनि त्यसको पुष्टि गर्छ ।’
त्यस्तै नेपालको सिमेन्ट र फलामे डण्डी उद्योगमा ग्रुप पायोनियर नै मानिन्छ । तर, पछिल्लो समय भने यहाँ पनि विवाद छ । यो ग्रुपअन्तर्गतको कम्पनी जगदम्बा स्टिलले लोडसेडिङको बेला लिएको डेडिकेटेट लाइनअन्तर्गतको दुई अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ बक्यौता तिर्न बाँकी छ । यो ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक शाहिल अग्रवाल हुन् ।
कोरोनाको संक्रमणको बेला कालोबजारी गर्ने सुलभ अग्रवालको कम्पनी जगदम्बा स्टिलले तत्कालीन विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलाई अनुचित लाभ दिएर डेडिकेटेट फिडर जडान गरेका थिए । जतिबेला जनताहरू १६ घण्टाको लोडसेडिङ थिए त्यो बेला शुलभको कम्पनीले विजुली पाएको थियो ।
कुलमान घिसिङले सो बक्यौता उठाउन खोज्नुभयो । सोअनुसार प्राधिकरणले उद्योगमा बिलसमेत पठायो । सर्वोच्च अदालतले प्राधिकरणले तोकेअनुसारको महसुल उठाउन भने पनि सरकारले गरेको हस्तक्षेपको कारण प्राधिकरणले बक्यौता उठाउन सकेन । अहिले विवाद ज्यूँकात्यूँ छ, प्राधिकरणबाट कुलमान नै बाहिरिसक्नुभयो । प्राधिकरणका अनुसार सबैभन्दा ठूलो बक्यौता शंकर ग्रुपको छ । जुन जगदम्बा स्टिलको हो ।
जगदम्बा स्टीललाई केही वर्षअघि सरकारले कवाडी कच्चापदार्थ प्रयोग गरेर गुणस्तरहीन स्टील उत्पादन गरेको भन्दै कारबाही पनि गरेको थियो । शंकर ग्रुपले मेडिकल आपूर्तिको क्षेत्रमा काम नगरे पनि कोरोना भाइरसको समयमा कमाउने अवसर देख्यो । त्यति मात्रै होइन, यो ग्रुप नक्कली भ्याटबिल प्रकरणमा पनि राम्रैसँग विवादमा मुछिएको थियो । यसको अर्थ के स्पष्ट हुन्छ भने शंकर ग्रुपको नियतमै खोट छ ।
अघिल्लो लेख आज मन्त्रिपरिषदको बैठक डाकियो
पछिल्लो लेख कालापानी जाने घोरेटो बाटोको ट्र्याक खोल्यो सेनाले